09/08/12 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Saturday, September 08, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန် စက်တင်ဘာ ၈ ရက် ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားသည့် “တိပိဋကဓရ တိပိဋက ကောဝိဒ တိပိဋ ကဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက သုတဗုဒ္ဓ”ဆရာတော် ၉ပါးတို့၏ “သုတဗုဒ္ဓ”အထူးတရားပွဲကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၃ ရက်အထိ ညစဉ် ၇း၃၀ တွင်ရန်ကုန်မြို့ ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊တံတားလေးလမ်းဝ ရှိ ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော် ၌ကျင်း ပမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါမှ မဆုံဆည်းဖူးသော ဆရာတော် ၉ပါးတို့၏ အထူးတရားပွဲဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် “သုတဗုဒ္ဓဘုရားတစ်ဆူ”အဖြစ်မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည့်အပြင်ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင် တို့နှလုံး အိမ်၌ကိန်းဝယ်စံပယ်သဖြင့် ဓမ္မစေတီလည်းထိုက်တော်မှုသော ဆရာတော်များက ဟောကြားမည်ဖြစ် သည်။၁၅ ရက်နေ့တွင် ယောဆရာတော်၊၁၆ ရက်နေ့တွင်ရေစကြိုဆရာတော်၊၁၇ ရက်နေ့ တွင် မော်ကျွန်း ဆရာတော်၊၁၈ ရက်နေ့တွင်မြင်းမှုဆရာတော်၊၁၉ ရက်နေ့တွင်မြင်းခြံဆရာတော် ၊၂၁ ရက်နေ့တွင် ရမ္မာဝတီဆရာတော်၊ ၂၂ ရက်နေ့တွင်စစ်ကိုင်းဆရာတော်၊၂၃ ရက်နေ့တွင် စွန်းလွန်းဆရာတော်တို့က ရဟန်း ၊ရှင်လူ၊ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို ဓမ္မအသိဥာဏ်ရရှိစေရန် တရားရေအေးတိုက်ကျွေးမည်ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အထက်မှာ ဦးရွေမန်းရှိတယ်
အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးမှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ကြမည် ဆိုသည့် အစိုးရ ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး မူဟောင်းသည် လက်တွေ့ မကျ သဖြင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး မှုဖြင့်သာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို လက်မှတ် ထိုးသင့်ကြောင်း အဆိုပြုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ ( KIO) ပြော ခွင့် ရသူ ဦးလာနန်းက ဆိုပါသည်။ “ ကျနော့်တို့က နိုင်ငံရေး ပြသနာကို နိုင်ငံရေးအရ အရင်ဆွေးနွေး ခဲ့ရင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဟာ အလွယ်လေးနဲ့ ပြီးသွား လိမ့်မယ်။ အခုဟာက သူတို့က အပစ်အရင်ရပ် ပြီးမှနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတဲ့ မူဟောင်းကို ခင်းပြီးတော့ အချိန်ဆွဲ ပေါ်လစီနဲ့ သွားပြီးတော့ အချိန်တခုမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ် လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ အစီစဉ်ကို လက်တွေ့ ကျအောင် အဆိုပြုနေတာပါ” ဟု ဆိုပါသည်။အစိုးရသည်၊ ၄င်းတို့၏ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ နိုင်ငံရေး အရ ဆွေးနွေးရေး (တဖွဲ့ချင်း)နှင့် ပင်လုံကဲ့သို့သော ညီလာခံကျင်းပ ရေးဟူသည့် အစီစဉ်ကိုသာ KIA လက်ခံပါက အပစ်ရပ်ရေး လက်မှတ် ထိုးမည်ဟု ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သောက ယမန်နေ့တွင် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌အမတ်တဦး၏မေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ http://www.mrtv3.net.mm/newpaper/79newsm.pdf စာမျက်နှာ (၂၀)တွင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် က ချင်ဒေသ၌ စစ်ဆင်ရေး မရှိဘဲ နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေးသာ ရှိကြောင်း လွှတ်တော် အမတ်တဦး၏ အမေးကို ပြန် လည်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ တကယ်စင်စစ် ကချင်ဒေသ၌ အစိုးရသည် တိုင်းတပ်နှစ်ခုနှင့် တပ်မပေါင်း (၅) ခု ထက်မနဲမှ စစ်အင် အား တသောင်းကျော်နှင့် ပြည်သာယာ စစ်ဆင်ရေးကို ဆင်နွှဲနေပါသည်ဟု ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့က ဆိုပါသည်။ http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/2005--kia-.html အစိုးရသည်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အပြည့်ဝ လိုလားကြောင်း၊ ဤအတွက် ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လမှ စ၍ KIA နှင့် ပြည်နယ်အဆင့်တွင် (၃) ကြိမ်၊ ပြည် တောင်စုအဆင့် တွင် (၃)ကြိမ်၊ အလွတ်သော (၄) ကြိမ် ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူး ချုပ် အောင်သော်က လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ သွားပါသည်။ သို့သော် KIA ဖက်ကမူ ဦးအောင်သောင်း ဦးဆောင်သော ပြည် ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်အဖွဲ့ နှင့် ဆွေးနွေး ရာတွင် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများသည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲ ရေးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေချိန် နီးနီး၌ ဦးအောင်သောင်း အစား ဦး အောင်မင်းတို့အဖွဲ့နှင့် ပြောင်းလဲ ဆွေးနွေး စေခဲ့ပါသည်။ ဤအခြေအနေမှ ဦးအောင်မင်းတို့အဖွဲ့နှင့် အလွတ်သဘော အရနှစ် ကြိမ်တိုင် ဆွေးနွေးပြီးသော်လည်း ယနေ့အထိ မရေမရာနှင့် အဆင်မပြေ မှုများဖြင့်သာ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။“ အတွေ့အကြုံကိုကရှိနေတယ်။ ကြားလူပါတဲ့ စုံစမ်းရေး ကော်မီရှင် ဖွဲ့ကြည့်ပါလား၊ သတ္တိရှိရင် အဖြေမှန် သိရအောင်။ အခု ကြည့် တိုင်းရင်းသား (၁၁) ဖွဲ့ ထဲမှာ (၁၀)နဲ့ အပစ်ရပ်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့၊ KIA ကသာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုချင်သယောင် ၀ါဒဖြန့် နေတယ် မဟုတ်ပါလား။ အကြောင်းမသိ ရင်ခက်မယ်၊ အဲဒီ(၁၀) ဖွဲ့ထဲမှာ ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပြေလည်နေပြီးလဲ၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး တပိုင်းတစနဲ့ တခြား အဖွဲ့တွေကို အချိန် ဆွဲထားတယ်မလား၊ တကယ်တော့ ဘယ်အဖွဲ့နဲ့မှ ပြေလည်တယ် ရယ်လို့ မတွေ့ရသေးဘူး။ အမြတ် ကတော့ အစိုးရ ဖက်က ထုတ်နေပြီးလေ ” ဟုKIA တပ်မှူး တဦးက ဆိုပါသည်။ သမ္မတသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့၌ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ခုခံ ကာကွယ်ရုံမှအပ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကေအိုင်အေ တပ်စခန်း များအား၊ ချီတက် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ သမ္မတ၏ ညွှန်ကြား ချက်အပေါ် တပ်မတော်က တိကျစွာ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းဟု ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးက လွှတ်တော် ၌ ဆိုခဲ့ပါသည်။
KIA ကမူ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များ စစ်ဆင်ရေး မရှိပါက တိုက်ပွဲများ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းလည်း မရှိပေ။ ဒုက္ခသည်များလည်း (၆) သောင်းမှ တသိန်းနီးပါး ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းလည်း မရှိပေ။ တရုတ် အစိုးရလည်း ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို မောင်း ထုတ်စရာလည်း ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ ကချင်ပြည်နယ် ဖါးကန့် ဒေသ၌လည်း အချိန်တိုအတွင်း စစ်ပြေးများ သောင်း နှင့်ချီပြီး ဖြစ်လာစရာလည်း မရှိပေ။ ဤအခြေအနေများသည် ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး တဦး၏ လွှတ်တော် တင်ပြချက်နှင့် နှိုင်း ယှဉ်ကြည့် စေလိုပါသည်။ ဟုတ် မဟုတ် သက်သေပြနိုင်ရန် လိုသည်ဟု ဆိုပါသည်။ဤသို့ ကြောင့် လွှတ်တော်မှ အခြေအနေမှန် သိရှိနိုင်ရန် ကချင်အရေးကို လွှတ်တော် စုံစမ်းရေး ကော်မီရှင် ဖွဲ့ပြီးလေ့လာသင့် ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက လွှတ်တော်ထဲက တပ်မတော်၏ ရှင်းပြချက်နှင့်သာ ရပ်နေပေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်လွတ် လပ်ရေး အဖွဲ့သည်လည်း အစိုးရတပ်ဖွဲ့၏ သဘောထားကို သိရှိနေပြီး ဖြစ်သည့် အတွက် အဆိုပြုချက်ကို လက်တွေ့ ကျကျ ဖြစ်စေရန် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုဖြစ်သာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး နည်းကို တင်ပြနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်း၌ တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေ အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား မှုကြောင့် ရထားခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်း
Posted by drmyochit Saturday, September 08, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းတွင် တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့အကြားတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မန္တလေးမြို့နှင့် မြစ်ကြီး နားမြို့အကြား ပြေးဆွဲသောရထားခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၃၅ မိနစ် ခန့်တွင် ကာလူနှင့် မော်ဟန်အကြား မိုင်တိုင်အမှတ် ၆၂၂/၈၉ အကြား တွင် ကေအိုင်အေနှင့် တပ်မတော်တို့အကြား ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ သံတံတားအမှတ် ၅၅၅ တွင် သံပေါင် သုံးပေပျက်စီးခဲ့ကာ သံလမ်း နှစ်ဖက် လေးပေခန့် ပျက်စီးခဲ့သည့် အတွက် ယင်းနေ့ ည ၇ နာရီခန့်မှစတင်၍
ရထားလမ်း အသွားအလာမရှိ ပိတ်လိုက်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ်အရ သိရှိရသည်။
“တိုက်ပွဲက မနေ့ညက ရထား လမ်းတစ်ဝိုက်မှာ ဖြစ်တယ်။ မော် ဟန်၊ ကာလူဘက်မှာ ဖြစ်တယ်။ မြစ်ကြီးနားနဲ့ဆို သိပ်ပြီး မဝေးတော့ဘူးပေါ့။ရထားက မနေ့ညကစပြီး မလာတော့တာ”ဟု မြစ်ကြီးနားမြို့မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောပြသည်။“တိုက်ပွဲက ည ၁၀ နာရီကျော် လောက်မှာ ပစ်ခတ်သံတွေ စဲသွားတယ်။ သံတံတားတင်မကဘူး၊ ရေ ပေါက်တံတားလေးတစ်ခုပါ ပျက်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု မြို့ခံတစ်ဦးကလည်း ပြောပြခဲ့သည်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်း တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့အကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုသည်၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လက စတင်ခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားရာ ဒေသသည် ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးမောက် မြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်း မော်မြို့နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်များ သို့ပါ သက်ရောက်မှုများရှိလာခဲ့ သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန် ပိုင်းကလည်း ဖားကန့်မြို့နယ်အ တွင်း တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေအကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ နယ်စပ် ကုန်သွယ် ရေးနှင့် ဆက်စပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊အဓိကလုပ်ကိုင်ရာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တစ်ကျော့ပြန် တိုက်ပွဲ များဖြစ်ပွားသည့် တစ်နှစ်ကျော် ကာလတွင် စီးပွားရေးပိုင်း နှောင့်နှေးမှုများ ရှိခဲ့သည်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နေရပ် ကျေးရွာများမှ တိမ်းရှောင်ကာ ဒုက္ခ သည်စခန်းများတွင်ခိုလှုံနေရသော ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် အခြား တိုင်းရင်း သားဦးရေစုစုပေါင်းမှာ တစ်သိန်း ၀န်းကျင်ရှိနေသည်ဟု လည်း သိရှိရသည်။“မြစ်ကြီးနားက ဗန်းမော်ဘက် ကလာတဲ့ ကုန်ရယ်၊ မန္တလေးဘက်က ရထားနဲ့ လာတဲ့ကုန်ရယ် ဒီနှစ်မျိုးကို အားထားနေရတာ။ဗန်းမော်ဘက် ကတော့ တရုတ် ကုန်တွေလာတယ်။ ရထားနဲ့တော့ အခြေခံစားသောက်ကုန်ပေါ့။ အခုလို ရထားလမ်းရပ်တော့ ကုန်စည် အ၀င်အ ထွက်တန့်သွားတယ်”ဟုမြစ်ကြီးနားမြို့ခံတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ MPU စနစ်သုံး Chip ကတ်များ လူထုအကြား စတင် သုံးစွဲနိုင်မည်
Myanmar Payment Union (MPU) စနစ်မှာ အသုံးပြုမယ့် Chip ကတ် တွေကို ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့ မှ စတင်ကာ အများပြည် သူများ စတင် အသုံးပြု နိုင်တော့မှာဖြစ်သည်။Myanmar Payment Union (MPU) စနစ်မှာ အသုံးပြုမယ့် Chip ကတ် တွေကို ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့ မှ စတင်ကာ အများပြည်သူများ စတင် အသုံးပြု နိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက် အရ သိရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Myanmar Payment Union ဌာန ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကိုလည်း ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့၊ နံနက် ၇ နာရီ အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ဝင်း အတွင်းရှိ MPU ဌာနရုံးမှာ ပြုလုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ မှာတော့ အဆိုပါ MPU စနစ်နဲ့ အသုံးပြု နိုင်မယ့် Chip ကတ် တွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်တွေ အချင်းချင်း စမ်းသပ် အသုံးပြု နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို MPU စနစ်မှာ အသုံးပြုမယ့် Chip ကတ်တွေဟာ လက်ရှိလူထု အကြားမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ATM ကတ်တွေ ထက်ပိုမိုပြီး လုံခြုံစိတ်ချ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုလ အသုံးပြုမယ့် MPU စနစ်နဲ့ Chip ကတ်တွေဟာ ဘဏ်အသီးသီးက ချပေးထားတဲ့ ATM စက်တိုင်းမှာ ငွေသား ထုတ်ယူ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် MUP စနစ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ Chip ကဒ်ဟာ ဘဏ်အလိုက် ကဒ်တွေ ခွဲခြား အသုံးပြုဖို့ မလိုတော့ဘဲ ကဒ်တစ်ကတ် ထဲနဲ့ ဘဏ်အသီးသီးရဲ့ ATM စက်တွေတိုင်းမှာ ငွေသား ထုတ်ယူ နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
Posted by drmyochit Saturday, September 08, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် လူငယ် တစ်ဦးအား စိတ်ကြွဆေးပြားသုံးသန်း သုံးသိန်းနှင့် အတူရဲကဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟုအေပီသတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ဘန်ကောက်မြို့ အနောက်ဘက် အစွန်းအဖျား နေအိမ်တလုံးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ၀င်ရောက်ရှာဖွေစဉ် အဆိုပါ ဆေးပြားများကို လူငယ် တစ်ဦးနှင့်အတူ စက်တင်ဘာ ၅ရက် နေ့ကဖမ်းဆီ ရမိခြင်း ဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော စိတ်ကြွဆေးပြားများ ၀င်ရောက် လမ်းကြောင်းနှင့်အရှေ့တောင် အာရှ၏ ဈေးကွက် တစ်ခု ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ယခုနှစ်အတွင်း စိတ်ကြွဆေးပြား အမျိုးမျိုး ၄ သန်းခန့် ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်း တင်သွင်းလာခြင်းကို ထိုင်းရဲအဖွဲ့က တားဆီး နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု ဖမ်းဆီးရရှိမူသည် အရေအတွက် အားဖြင့် ဒုတိယ အကြိမ် အများဆုံးဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။အဖမ်းခံရသူ Sophon Sawaengsuk က ၎င်းမှာ အဆိုပါ အိမ်အား စောင့်ရှောက်သူ ဟု ပြောဆိုသော်လည်း သူ့မှာ ထိုင်းနိ်ုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်း ခရိုင်မှ မူးယစ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်ဟုရဲအရာရှိကပြောသည်။
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းတံတား ဗုံးထိမှန်၍ပျက်စီး
Posted by drmyochit Saturday, September 08, 2012, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ် ကဒူ-မော်ဟန် ဘူတာအကြား မိုင်တိုင်အမှတ် ၆၂၁/၈/၉ ကြားရှိတံတား အမှတ် ၅၅၅ ဗုံးထိမှန်၍ ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါဖြစ်ပွားမှုမှာ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် ညနေ ၆နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိသေးသော ဗုံးတစ်လုံးကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ တံတာပျက်စီးမှုကြောင့် မော်ဟန် ဘူတာတွင် ၃၇ အဆန် ရထား ၊ ရပ်နားနေပြီး စက်တင်ဘာလ၇ ရက် ညနေ ၃နာရီ အချိန် ခန့် တွင် ရထား များပြန်လည် သွားလာ နိုင်မည် ဟု မော်ဟန် ဘူတာ ရုံပိုင်ကြီး မှပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် အိမ်ခြေ (၅) ဆောင်ခန့်ရှိသော ဆိတ်ကြီးနားကျေးရွာအား ဘင်္ဂလီများက စက်တင်ဘာ (၅) ရက် ညနေ (၈) နာရီခန့်တွင် မီးလာတိုက်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
" ဆိပ်ကြီးရွာကို မီးလာတိုက်တော့ ကျနော်တို့ ဦးဂါရွာက ရွာသားတွေ လိုက်သွားတယ်။ မီးတိုက်တဲ့ လူတွေကိုတော့ ဘယ် သူလဲဆိုတာ မသိလိုက်ဘူး။ ထွက်ပြေးသွားတယ်။ ကိုဌေးဖြူ အိမ်တစ်ဆောင်တော့ မီးလောင်သွားတယ်။ " ဟု ဦးဂါ ရွာမှ ရွားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဆိပ်ကြီးကျေးရွာမှာ ဦးဂါကျေးရွာနှင့် ဂူတောင်ကျေးရွာကြားတွင် တည်ရှိပြီး အနောက်ပြင် ကုလားရွာနဲ့လည်း နီးစပ် ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန်လ အရေးအခင်းအဖြစ် မီကာလာက ဆိပ်ကြီးနားကျေးရွာသားများမှာ မိမိတို့ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော် ဂူတောင် ကျေးရွာသားများ အသတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ရွာသားများမှာ နေ့ဘက်တွင် နေထိုင်ကာ မိမိတို့ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပြီး ညဘက်တွင် မအိပ်ဝံ့ သဖြင့် နီးစပ်ရာကျေးရွာများတွင် သွားအိပ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့ကလည်း အနောက်ပြင်မှ ဘင်္ဂလီများသည် ဂူတောင်ကျေးရွာ အောက်ရွာတွင်ရှိသော အိမ်ခြေ (၆) ဆောင်ခန့်အား မီးလာတိုက်ရာ ဂူတောင်ရွာသားများက အနောက်ပြင်ရွာသို့ လိုက်သွားရာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား (၁၀)ဦး အသတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
မျက်မှောက်ကာလတွင် အကြမ်းဖက်မှုသည် တစ်ကမ္ဘ္ဘာလုံးပျံ့နှံ့လာလျက်ရှိရာ အမေ ရိကန် နှင့် ရုရှားနိုင်ငံများတွင်ပင် သြဂုတ်လအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ရ လျက်ရှိ သည်။ အကြမ်းဖက်မှုများသည် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြစ်တည်လာလျက်ရှိရာအများ အားဖြင့် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်တို့၏အကြမ်းဖက်မှုများ၊ နိုင်ငံခွဲထွက်လို၍ အကြမ်းဖက်မှုများ စသည်ဖြင့်တွေ့လာရသည်။ အကြမ်း ဖက် မှုနှိမ်နင်းရေးအတွက် နိုင်ငံတိုင်း တွင် ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်း၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဆိုသည်မှာ ကြိုတင်လက်ဦးမှုရယူ၍တားဆီးနှိမ်နင်းခြင်း၊ စစ်ဆင်ရေး များပြုလုပ်၍တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းခြင်းဟု အမေရိကန်တို့မှအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ အာဖဂန် နစ္စ တန်တွင် တာလီ ဘန်တို့၏အကြမ်းဖက်မှုမြင့်မားလာသဖြင့် အမေရိကန်တို့မှ ကျူးကျော်စစ်ဆင် နွှဲခဲ့ကြသည်။ ချေချင်းညှာသို့ ရုရှား တို့ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်မှုအတွက် တရားသောစစ်ဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဟု မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အစ္စ ရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်းပဋိပက္ခများ၊ ကိုလံဘီယာပြည်တွင်းစစ်၊ ဗြိတိန်၏အိုင်ယာလန်သူပုန်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် သီရိလ င်္ကာပြည်တွင်း စစ်တို့သည် အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးစစ်ပွဲများပင်ဖြစ်သည်။
သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းရှိ တမီးလ်ကျားသူပုန်တို့သည် လွတ်လပ်သော တမီးလ်နိုင်ငံ ခွဲထွက်ရန်အတွက် အစိုးရအားဆန့်ကျင်၍ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ တမီးလ်သူပုန် တို့သည် အာရှ၏ အရှည် ကြာဆုံးသောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ပင်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ ပြည်ထောင်စုခွဲထွက်လိုသည့် ကချင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့်အလား သဏ္ဍာန်ခပ်ဆင်ဆင်တူလေသည်။ တမီးလ်ကျား သူပုန်များ သည် သီရိလင်္ကာ မြောက်ပိုင်း ကိုသိမ်းပိုက်ထားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အင်အားမှာ ၇၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး အစိုးရတပ် အင်အားမှာ ၁၅၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြည်သူအားအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အစိုးရ အဆောက်အဦများအား ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်း၊ စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက် ခိုက်ခြင်း စသည်ဖြင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား အိန္ဒိယ နိုင်ငံရှိတမီးလ်များနှင့် ဥရောပ၊ အာဖရိကရှိ တမီးလ်များက ထောက်ခံအားပေးခဲ့ ကြသည်။ ၎င်း အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံကပါ အကူအညီများပေးခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ အစိုးရနှင့် (၆)ကြိမ် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြ သည်။ သို့ သော်လည်း ၂၀၀၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တမီးလ်ကျားတို့သည် သီရိလင်္ကာ ရွေးကောက် ပွဲမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့ကလက်မခံခဲ့ဘဲ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အပြန် အလှန်စွပ်စွဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကာ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပျက်ပြယ်ခဲ့သည်။ ၎င်း နောက်ပိုင်းအစိုးရတပ်များနှင့် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အစိုးရအပေါ်တွင် နိုင်ငံတ ကာမှဖိအားပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် တမီးလ်ကျားသူပုန်တို့မှ အထိ အခိုက်များလာသဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် အစိုးရသို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း အစိုးရမှ ပယ်ချခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်တမီးလ်သူပုန်များကို လေကြောင်းအပါအ၀င် အစိုး ရတပ် များကအပြီး သတ်တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း နှစ်ဖက်အကျအဆုံး ၂၅၀၀၀ ကျော် ခန့်ရှိပြီး ၇၀၀၀ ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ပြည်သူ ၃၅၀၀၀၀ ခန့်အား ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ ပြောင်း စေခဲ့ရသည်။
မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနက် KIA ၏ လုပ် ဆောင်မှုများကိုလေ့လာကြည့်ပါက ရထားလမ်းနှင့် ကားလမ်းတံတားများဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး ခြင်း၊ မြစ်ကြီး နားမြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်များတွင် မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်း၊ တာပိန် ရေအား လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းတွင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၇ ဦးအားသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း၊ ကျေးရွာလူကြီး အချို့ နှင့် ပြည်သူအချို့အားသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းများ၊ နေရာ အနှံ့မိုင်းထောင်ခြင်းများမှာ ကချင် ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးနှင့် မည်သို့မျှမသက်ဆိုင်ဘဲ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များသာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရသည်။ ကချင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ရှမ်းလူငယ်/မိန်းကလေး များအား အတင်း အဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းခြင်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများပင် ဖြစ်သည်။ ပြန် ကြားရေးဌာန၏မှတ်တမ်းများအရ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း များအား KIAမှမိုင်း ခွဲဖျက်ဆီးမှု ၁၅၁ ကြိမ်၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် အဆောက်အအုံများအား ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှု ၂၃ ကြိမ်၊ ကျေးရွာများ အားမီးရှို့မှု ၁၃ ကြိမ်၊ အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီး၍ စစ် သားစုဆောင်းမှုအကြိမ် ၅၀၀ ကျော်နှင့် KIA မိုင်းကြောင့် သေဆုံးဒဏ်ရာရသူ ရာဂဏန်း ကျော်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်လူထုအနေဖြင့် ရထားလမ်း၊ ကားလမ်း၊ တံတား များဖျက်ဆီးခံထားရသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ကာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ ဘဲ၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှမိသားစုဘ၀လုံခြုံရေးအား ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တိုင်းရင်းသား ညီအစ် ကိုများ ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ရေး အတွက် စိတ်ရှည်သည်းခံစွာဖြင့် အကြိမ် ကြိမ်ကမ်းလှမ်း၍ အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ စေ့စပ်ဆွေး နွေးခဲ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သဘောထားမမှန်သဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်မှသွေဖည်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ အချိန် ဆွဲ၍သွေးသစ်လောင်းခြင်းနှင့် အင်အားဖြည့်တင်းခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲမှ မည်သည့်အကျိုးရလဒ်မျှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုး ရမှပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် အလိုက်သင့်ပါမလာဘဲ နောက် ကျန်နေသူ၊ နောက်ပြန်သွားလိုသူများကို လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့မည်ဟု နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပြော ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
KIA ၏လုပ်ရပ်များသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ တမီးလ်ကျားသူပုန်တို့၏ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များနှင့် ထပ်တူနီး ပါးတူညီနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ KIA အနေဖြင့်ယခုကဲ့သို့သာ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအတိုင်း ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းမည်ဆိုလျှင် ပြည်သူလူထု၏အကျိုး စီးပွားကိုကာကွယ်ရန်အတွက် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ တမီးလ်ကျားသူပုန်များအား ပြတ်ပြတ် သား သားနှိမ်နင်းသကဲ့သို့ အစိုးရမှပြတ်သား စွာဆောင်ရွက် သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း မနောမြေမှ အတိ ဒုက္ခရောက်နေသည့် ပြည်သူများကိုယ်စားဆန္ဒပြုလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက နိုဗဲလ်ဆု ပြန်သိမ်းသင့်သလား?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ပြန်ရုပ်သိမ်းသင့်သလား လို့ ပညာရှင်
တယောက်က အမေရိကန်အခြေစိုက်အွန်လိုင်းသတင်းစာ huffingtonpost.com မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဆောင်းပါးရေးပြီးမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။
သူကတော့ အာဇင်အီဘရာဟင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က PhD ဘွဲ့ရ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။
(ရခိုင်ဒေသမှာ) ဖြစ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ရပ်သွားအောင် လုပ်ဖို့ ဆိုတာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အရေးယူ ဆောင်ရွက် မှ ဖြစ်မယ်၊
Human Rights Watch, ကုလသမဂ္ဂ နဲ့ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကြီးတွေ ပြောဆိုနေတဲ့ကြားက ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ နယ်စပ်ဒေသမှာ (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ) အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကလည်း နိုင်ငံမဲ့ဒုက္ခသည်တွေဆီကို လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကို မရောက်အောင် ပိတ်ပင် တားဆီးနေတယ်
ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခက်အခဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက အသံတိတ်နေတယ် စသဖြင့် သူက ရေးထားပါတယ်။ (သူ့ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို ဒီစာစု အောက်ဆုံးမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်)
ဒီဆောင်းပါးမှာ အဓိက အကြောင်းအရာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရိုဟင်ဂျာအရေး ၀င်ရောက်ပြောဆိုဖို့ တိုက်တွန်းတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလုပ်နိုင်ရင် ပေးထားတဲ့ နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ပြန်ရုပ်သိမ်းသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
စာဖတ်သူအများအပြားက ဒီဆောင်းပါးကို မှတ်ချက်တွေ တပြုံတခေါင်းကြီး ပေးနေကြပါတယ်။ အဲဒီထဲက myintwinthein ဆိုသူရဲ့ မှတ်ချက်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် -
ဒီပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် တဲ့။"ပြဿနာရဲ့ ရင်းမြစ်က ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာပဲလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထောက်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ" လို့ ဆိုပါတယ်။"ဒီဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ PhD ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းသင့်သလား" လို့လည်း သူက မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။
ဒါက မူရင်းဆောင်းပါးပါ -
Should Aung San Suu Kyi be Stripped of her Nobel Peace Prize?
Posted: 09/04/2012 12:42 pm
The Nobel Peace prize is generally awarded in recognition of achievements; or as inspiration to help mobilize international pressure to support human rights activists in countries where reform is urgently needed. President Obama's Peace prize in 2009 was for his "extraordinary efforts to strengthen diplomacy and cooperation between peoples" and for fostering "a new climate" in international relations, especially in reaching out to the Muslim world.
So with the latest Nobel Laureate Aung San Suu Kyi, hopefully, the symbol of the Peace Prize becomes more meaningful. Leader of the Democracy movement in Myanmar, Aung San Suu Kyi has for many years represented peaceful resistance to oppression. In her acceptance speech she said the award was for "a free, secure and just society" and international acknowledgement that "the oppressed and the isolated in Burma were alsoapart of the world."
According to Maung Zami,aBurma expert and visiting fellow at the London School of Economics, "Aung San Suu Kyi has absolutely nothing to gain by opening her mouth on this. She is no longerapolitical dissident trying to stick to her principles. She'sapolitician and her eyes are fixed on the prize, which is the 2015 majority Buddhist vote."
If this is indeed true, then the tragedy of the 800,000 Rohingya people is even greater. The persecuted Rohingya people are outcasts inaBuddhist society and there isawidespread belief, in government and even among some pro-democracy groups, that they are "illegal immigrants from Bangladesh." A 1982 law excluded them from being recognized as an official minority and they have never been granted citizenship. Described by the UN as one of the world's most persecuted minorities, the recent upsurge in violence has led toahumanitarian crisis as thousands of refugees are fleeing the security forces and the local Buddhists and seeking refuge over the border in Bangladesh.
The government of Bangladesh however, is refusing these stateless refugees access to humanitarian aid. As reported by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, there is widespread famine in the Kutupalong refugee camp in Bangladesh. In spite of reports from Human Rights Watch, United Nations and prominent aid organizations, the Rohingya people continue to suffer terribly on both sides of the border, in Arakan state in Burma and in the Cox's Bazaar area in Bangladesh.
Aung San Suu Kyi has the moral authority to call on the generals to stop the human tragedy taking place. The specious argument that these people are not Burmese citizens calls to mind the bumper sticker familiar in the US immigration debate, "No human being is illegal." Whether born in Burma or not, whether they speakaBangladeshi dialect or not, whether they are Muslim or Christian or Buddhist, the Rohingya people deserve the world's compassion and protection from oppression and persecution.
There remains something deeply flawed in the Buddhist nation, with its ancient traditions of peace and non-aggression, if anti-Muslim rhetoric is encouraged asaway of diverting attention from the generals' abuses of power. Perhaps the Nobel Committee should look again at its criteria for awarding the Peace Prize and reconsider its recent decisions. The prize should be awarded for the attainment of peace and freedom, for the real achievement of an end to sectarian violence, not just talking about it, hoping for it and wishing it were true. That will not feed or shelteradestitute and persecuted Rohingya family tonight. They needachampion now, to speak up now on their behalf against all persecution no matter who is the oppressor and who the oppressed.
ရန်ကုန်မြို့ ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင် မီးလောင်မှု မြင်ကွင်းများ
ယနေ့ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ် ၀န်းကျင်ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်(၁) လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်း ထောင့်ရှိ အိမ်သုံး မီးဖိုများတွင် အသုံးပြုသည့် ဂက်စ် ဖြည့်သွင်းသော “ချို” ဂက်စ်ဆိုင်မှ စတင်၍ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။။ မီးလောင်ရာသို့ မီ
းသတ်ကား ၂၅ စီးခန့် ရောက်ရှိနေပြီး ငြှိမ်းသတ်မှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ လတ်တလောတွင် ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင် ၀န်ထမ်းတဦး မီးလောင်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသွားသည်ဟု သိရှိရပြီး မီလောင်မှုမှာ ဓာတ်ငွေ့အိုး ယိုစိမ့်မှုမှ စတင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
Posted by drmyochit Saturday, September 08, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
သူသာ ရှိနေသေးရင် ကျန်စစ်သား၊ ငထွေရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်နဲ့ ညောင်ဦးဖီးဆိုတဲ့ စစ်သည်လေးသိန်းကို ရခိုင်ဒေသကို အမြန်သွား၊ ကျူးကျော်သူတွေကို ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်အောင် နှိမ်နင်းခဲ့လို့ အမိန့်တော်ချမှတ်မှာ သေချာတယ်လို့ တွေးမိပြီး ကြက်သီးမွေးညင်းတွေများတောင် ထမိတယ်။
သူသာ ရှိနေသေးရင် ငါတို့နိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ခေတ်မီစက်မှုနိုင်ငံ ဖြစ်နေလောက်ပြီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေက လေးစားအားကျရတဲ့ နည်းပညာနိုင်ငံ ဖြစ်နေလောက်ပြီလို့ ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်။
သူသာ ရှိနေသေးရင် အခုလို လွှတ်တော်တွေမှာ ရန်ဖြစ်နေတာတွေ၊ ဟိုနေရာဆန္ဒပြ၊ ဒီနေရာဆန္ဒပြ လုပ်နေတာတွေကိုတွေ့ရင် ""ကျုပ်တို့နိုင်ငံကဖြင့် သူများတွေနောက်မှာ အနှစ် ၄၀ လောက် ပြတ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ၊ အခုအချိန်အထိ ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေက ရန်ဖြစ်ကောင်းနေတုန်း၊ ဝေလေလေလုပ်လို့ ကောင်းနေတုန်း၊ သူများတစ်လှမ်းလှမ်းရင် ကိုယ်တွေက ဆယ်လှမ်း၊ အလှမ်းနှစ်ဆယ်လှမ်းပြီး ပြဲကားနေအောင် လုပ်နိုင်ပါမှ သူတို့ကိုမီမယ်၊ အခုလိုသာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လက်ညှိုးထိုးပြီး ရန်ဖြစ်နေကြမယ်၊ ဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့ ဟိုနေရာစု ဒီနေရာစု၊ ဟိုအော်ဒီအော် လုပ်နေကြပြီး အစိုးရကို အကျပ်ရိုက်အောင် လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ဖာနိုင်ငံဘ၀ကနေ ဘယ်တော့မှ တက်မှာမဟုတ်ဘူး" လို့ ပြောဦးမယ်ထင်ပါရဲ့လို့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တွေးနေမိတယ်။
သူသာ ရှိနေသေးရင် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်နေတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စေမယ့်၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့်၊ အားအင်တွေ ပြည့်ဖြိုးစေမယ့် တေးသီချင်းတွေ သီကုံးရေးသားမှာပဲလို့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တွေးနေမိတယ်။
သူသာ ရှိနေသေးရင် မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကို ဗေဒါလမ်းကဗျာ ရွတ်သံတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပြီး ထလော့မြန်မာ၊ မြန်မာထလော့၊ အားမပျော့နဲ့လို့ အားပေးမှာ၊ လှုံ့ဆော်မှာ၊ တိုက်တွန်းမှာ သေချာတယ်လို့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တွေးနေမိတယ်။
သူသာ ရှိနေသေးရင် လိုတစ်မျိုး၊ မလိုတစ်မျိုး သတင်းဖော်ပြ ရေးသားတတ်ကြတဲ့၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် မပီသတဲ့ သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ မီဒီယာတွေကို ကလောင်ကြိမ်လုံးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ရိုက်နှက်ဆုံးမမှာပဲ လို့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တွေးနေမိတယ်။
သူသာ ရှိနေသေးရင် နိုင်ငံတော်ကြီးလည်း ပန်းတိုင်ရောက်၊ ပြည်သူတွေလည်း ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ အားပေးမှာသေချာတယ်၊ အပြောင်းအလဲအတွက် လူထုလိုတယ်လို့ လေးလေးနက်နက်ပြောမှာ သေချာတယ်၊ ကွင်းထဲက ၂၅ ယောက် အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောမှာသေချာတယ်၊ လာရင်းကိစ္စကို မမေ့ဖို့ သတိပေးမှာ သေချာတယ်၊ အင်စတီကျူးရှင်းတွေ အားကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ နှိုးဆော်မှာသေချာတယ်။
သူသာ နိုင်ငံရေးစာပေတွေ ရေးဦးမယ်ဆိုရင် လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ အတွေးအမြင်၊ အရေးအသားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ဆွမှာ၊ မုန်တိုင်းဆင်မှာ သေချာတယ်လို့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တွေးနေမိတယ်။
လွမ်းစရာတွေ များလိုက်တာဗျာ။ ဘယ်လောက်တောင် လွမ်းရသလဲဆိုရင် ကဗျာဆရာကြီး ခင်လေးမောင်ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲက အသုံးအနှုန်းတစ်ခုကို ကိုးကားရမယ်ဆိုရင် "လွမ်းလို့ခွေနုံး" ပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို ချီတက်နေတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေး၊ ကိုယ့်ပြည်သူအရေး၊ ကိုယ့်လူမျိုးအရေး၊ ကိုယ့်အနာဂတ်အရေး၊ ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေရဲ့အရေး တွေးကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါ လား....လား.... ကျွန်တော်ဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် လွမ်းမိပါရဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ရောဗျ....။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
ည ၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
မူးယစ်ဆေးဝါး မြန်မာ ဆက်ထုတ်နေဟု ထိုင်း ဒု ၀န်ကြီးချုပ်ပြော
ထိုင်းနိုင်ငံ အနေနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင်နေသော်လည်းအောင်မြင်မှုမရခြင်းသည် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှ တဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်နိုင်သော ဓာတုဆေးဝါးများကို ရယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထုတ်လုပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု ထိုင်း ဒု ၀န်ကြီးချုပ် ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်းက ပြောသည်။
ယမန်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ သိန်း ခွဲခန့် တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွဆေးပြား ၃ သန်းကျော် ဖမ်းဆီးရမိမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ထည့်သွင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။“မူးယစ်ဆေးဝါးတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ဖမ်းမိ ဖမ်းမိ မကုန်နိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ထုတ်လုပ်နေတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်နိုင်သော ဓာတုဆေးဝါးများကို ထိန်းချုပ်သော်လည်း မူးယစ်မှောင်ခိုသမားများက လမ်းကြောင်း ပြောင်း၍ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှ ရယူပြီး ထုတ်လုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်းက ဆက်ပြောသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ထိုင်း အာဏာပိုင်များကို မူးယစ်ဆေးဝါး နှိမ်နင်းရေး အတွက် ညွန်ကြားထားသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။ချလုံ ယူဘမ်းပရုန်းက ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသ ချင်းရိုင် ခရိုင်သည် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက် ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဓိက ကျသော နေရာ တခုဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုသေးသည်။မူးယစ်းဆေးဝါး ကိစ္စနှင့် ပတ် သက်၍ မြန်မာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကို ထိုင်း ဒု ၀န်ကြီးချုပ် က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိဟု ပြောဆိုကြောင်း မန်နေဂျာ အွန်လိုင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင်လည်း ယနေ့ ဖော်ပြထားသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်နေမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ အစိုးရက မည်သို့ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိလိုကြောင်း သတင်းထောက်များ ၏ မေးခွန်းနှင့် စပ်ဆက်၍ ချလုံ ယူဘမ်းပရုန်းက အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ တချို့သော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက ထုတ်လုပ်နေကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ သယ်ဆောင် ရောင်းချနေကြောင်း သတင်း ဖော်ပြချက်များအရ သိရှိရသည်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ၀ ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်ဖွဲ့(UWSA)နှင့် မူးယစ် မှောင်ခိုသမားများ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု ယနေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပိုစ့် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။အမေရိကန် အစိုးကလည်း ယင်းဒေသတွင်းရှိ ငြိ်မ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ တဖွဲ့ ဖြစ်သော UWSA
သည် အာရှတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများကို အကြီးအကျယ် ထုတ်လုပ်နေသည့် အဖွဲ့ တဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ပြီးခဲ့သည့်လ ၃၁ ရက်နေ့ကလည်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်ဆိုင်မြို့ တဖက်ကမ်းရှိ
တာချီလိတ်မြို့တွင် ကာလ တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁၀၉၂ သိန်းခန့် ရှိ စိတ်ကြွဆေးပြားထုတ်လုပ်သော စက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပါအ၀င် တရားခံဟု ယူဆရသူ ၄ ဦးကို ဖမ်း ဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း တာချီလိတ် အင်တာနက် စာမျက်နှာကဖော်ပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဖဂန်နစ္စတန် ပြီးလျှင် မူးယစ်ဆေးဝါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေ ကြောင်း သိရသည်။(ဧရာဝတီ) တကမ္ဘာလုံး၌ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူပေါင်း ၂၇ သန်း ခန့်ရှိပြီး တနှစ်လျှင် သုံးစွဲသူ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး သေဆုံးမှု ရှိကြောင်း၊ ဘိန်းဖြူ နှင့် ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကြောင့် တနှစ်လျှင် လူ ၂ သိန်း ၀န်းကျင် သေဆုံးမှုရှိကြောင်းလည်း ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်မှု ဆိုင်ရာရုံး(UNODC)၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ကား အရစ်ကျဝယ်ယူခြင်း အတွက် စနစ်အသစ်
ကား အရစ်ကျဝယ်ယူခြင်း အတွက် စနစ်အသစ်အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် ချေးငွေဌာနသည် အငှားဝယ်ယူ ရောင်းချသော စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ယူလိုသူများကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည်။ယခင်က ငွေကြေး အာမခံဖြင့်သာ ဝယ်ယူနိုင်ကြသည့်စနစ်အစား၊ ယခုအခါတွင် ငွေကြေးအာမခံမလိုဘဲ မည်သူမဆို ဝယ်ယူ နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပေးအပ်ပါသည်။
၁။ ရောင်းချသည့်မော်တော်ယာဉ်အား မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတွင် အလုံးစုံ အာမခံထားရှိပေးရမည်။
၂။ သက်တမ်းမပြည့်မီ ပြန်လည်ပေးဆပ်သော ချေးငွေများအတွက် ငှားရမ်းခ ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း (Refund) နှင့် အရစ်ကျ ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းများအတွက် ပျက်ကွက်ကြေး (Penalty) စနစ်များလည်း ရှိပါသည်။
၃။ သက်တမ်းနှင့် နှုန်းထားများ -
သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၂၀% သတ်မှတ်ပါက -
ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၈%
ဝန်ဆောင်ခ (Service Charges) ၁%
သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၃၀% သတ်မှတ်ပါက -
ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၇%
သက်တမ်း ၁နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၄၀% သတ်မှတ်ပါက -
ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၅%
သက်တမ်း ၂နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၂၀% သတ်မှတ်ပါက -
ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၁၂%
သက်တမ်း ၂နှစ် ကနဦး ပေးသွင်းငွေ ၃၀% သတ်မှတ်ပါက -
ငှားရမ်းခ (Rental Fees) ၁၁%
၄။ ဝယ်ယူနိုင်သော နေရာများ -
အမှတ်(၉)၊အေးရိပ်မွန်လမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း ၀၁-၅၃၁၃၇၃၊ ၀၁-၅၁၂၉၂၁
အမှတ်(၆၈)၊ ဒီပဲယင်းဝန်ထောက်ဦးမြဲလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၄)၊ လှိုင်သာယာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း ၀၁-၆၈၅၀၄၉* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား - လူစီးမော်တော်ယာဉ် (ယာဉ်ငယ်)
၂။ Aung Gyi Trading Co.,Ltd
အမှတ် ၁၅၃၊ မောင်သန်းလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့ နယ်။ ဖုန်း - ၆၄၃၆၂၁၊ ၆၁၇၁၀၁၊ ၀၉ ၅၅၀၅၈၆၂* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား - မီးစက်နှင့် ကားများ၊ လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်။
၃။ Garmanit Trading Co.,ltd
အမှတ် ၇၅-စီ၊ အေးရိပ်သာ ၁လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်။ ဖုန်း ၅၄၇၅၃၈၊ ၅၅၇၆၇၇
* ရောင်းချသည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား - လူစီးမောင်တော်ယာဉ် (ယာဉ်ငယ်)
၄။ Shwe Yamone
ဖုန်း ၆၈၅၃၂၀၊ ၆၈၅၄၅၀၊ ၆၅၆၇၀၈
မလေးရှားကို မြန်မာအမျိုးသမီး အလုပ်သမများ တရားဝင်ပို့ဆောင်နေပြီ
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုသော မြန်မာအမျိုးသမီး လုပ်သားများတရားဝင် ပို့ဆာင်ပေးနေမှုကို သြဂုတ်လ နောက်ဆုံးပတ်မှ စတင်နေခဲ့ရာ မြန်မာအမျိုးသမီး လုပ်သားများကိုပြည်ပနိုင်ငံများတွင် တရားဝင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် စတင်ခွင့်ပြုမှု ဖြစ်လာသည်။မလေးရှားငွေ ရင်းဂစ် ၉၀၀ သို့မဟုတ် တလစာလုပ်အားခကို ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည့် အလုပ်များ အတွက် လုပ်သားဦးရေ နှစ်ရာခန့် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများမှ အေဂျင်စီ သုံးခု စေလွှတ်ခွင့် ရခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီ အသိုင်းအဝန်းမှ သိရသည်။ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ စက်ရုံက အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ လုပ်တဲ့ စက်ရုံပါ။ နေစရာ နေရာကလည်း အမျိုး သမီးတွေ အတွက် လုံခြုံမှု ရှိပါတယ်။ စက်ရုံက လူ ၇၀၀၀ လောက် လိုပါသေးတယ် ” ဟု ပြောသည်။ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတခု၏ အပြောအရ သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူအတွက် ကုမ္ပဏီမှလေယာဉ် လက်မှတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန်လည် ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အသက် ၂ဝ မှ ၃၅ နှစ်အတွင်း အခြေခံပညာ အဆင့် ရှစ်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ သွားရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။သို့သော် ဦးစွာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူက ငွေစိုက်ထုတ်ထားရမှာဖြစ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာရပြီးချိန် တွင် ကုမ္ပဏီက ကုန်ကျငွေကို ပြန်အမ်းမှာ ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသို့ ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် လုပ်ခလစာမှ တလလျှင် ရင်းဂစ်ငွေ ၁၅၀ ဖြင့် ခြောက်လ ဖြတ်တောက်သွားမှာ ဖြစ်သည်။တလလျှင် ရက် ၂၀ ပုံမှန် အလုပ်ရက် သတ်မှတ်ထားပြီး လစာမှာ ရင်းဂစ် ၉၀၀ ဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့ပေါက်ဈေးမှာ တစ်ရင်းဂစ်လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၇၉.၄ ကျပ် ဖြစ်သည်။ စနေနှင့် တနင်္ဂနွေ နေ့များကို အချိန်ပို အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပြီး အချိန်ပိုကြေးပေးမည် ဟုဆိုသည်။လေယာဉ်လက်မှတ်ရပြီးချိန်တွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုခြင်း မရှိတော့လျှင် လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ် ထားသည်။သွားရောက် လုပ်ကိုင်မည့် အသက် ၃၀ ဝန်းကျင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးက “ အချိန်ပို မရှိရင်တော့ မကိုက်ဘူး။ ဖြတ်မှာနဲ့ ဆိုရင် တစ်လကို (ကျပ်) တစ်သိန်းကျော်ပဲကျန်မယ်။အချိန်ပိုရှိပါစေဆုတောင်းရမှာပဲ။”ဟုဆိုသည်။
တူရကီနိုင်ငံတွင် လှေနစ်မြုပ်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၆၀ ခန့်သေဆုံး
တူရကီနိုင်ငံ အေနာက်ပိုင်း အေဂျီယမ်(Aegean) ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးမှာ လှေ ၁ စီး မေန့က နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အနည်းဆုံး၆၀ လောက် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ကမ်းခြေ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။မန်ဒဲရိုစ် (Menderes) ကမ်းခြေ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တာဆင် ကဒ် ဘေအိုလာ (Tahsin Kurtbeyoglu) က “သေဆုံးတဲ့ အေရအတွက်က ၆၀ လောက်ရှိသွားပြီ။ အမျိုးသား ၁၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၈ ဦး ဖြစ်ပြီးတော့ လူငယ် ယောကျာ်းလေး ၁၁ ဦး၊ မိန်းကေလး ၁၇ ဦးနဲ့ ကေလး ၃ ဦး သေဆုံးတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။လှေဟာ ကေလးနဲ့ အမျိုးသမီး အများစု အပါအဝင် လူ ၁၀ဝ လောက် သယ်ဆောင်လာတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ လှေပ်ါမှာ ပါလာတဲ့ သူအများစုက ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ သားတွေ ဖြစ်သလို ဆီးရီးယားနဲ့ အီရတ်တွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ တူရကီ လှေမာင်းသမားနဲ့ သူရဲ့အကူတွေကိုလည်း ကယ်တင်ဖမ်းဆီးထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးနဲ့ မိန်းမတွေကို လှေ ရဲ့ အောက်အခန်းထဲမှာ ပိတ်ထားတဲ့အတွက် လူအသေအပျောက် မြင့်မားတာ လို့လည်း ပြောပါတယ်။
လူကုန်ကူးသူတွေက ဥရောပမှာ ခိုလှုံခွင့်ရှာဖွေဖို့ အာမခံချက်နဲ့ ခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ပထ မ စုံစမ်း ချက်တွေအရ လူတွေပြည့်ညပ်နေတဲ့ လှေငယ်ဟာ အရုဏ်ဦးမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလှေဟာ ဘယ်ကို သွားရောက်မယ့် ဆိုတာကိုတော့ မသိရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ဂရိနဲ့ နီးတဲ့ တူရကီ အေနာက်ဘက် ကမ်းခြေ အာမစ်ဘေလီ (Ahmetbeyli) မြို့ ကနေ ထွက်ခွာလာတာလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ခိုလှုံခွင့် ရှာဖွေသူတွေအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲကို သွားရောက်ဖို့အတွက်ဂရိဟာ ဝင်ပေါက်တခု ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ထောင်နဲ့ ချီတဲ့သူတွေက တူရကီကို ဖြတ်ပြီးတော့ ဂရိကို သွားရောက်လေ့ရှိပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးမှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ကြမည် ဆ...
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်း၌ တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်...
စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ MPU စနစ်သုံး Chip ကတ်မ...
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းတံတား ဗုံးထိမှန်၍ပျက်စီ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက နိုဗဲလ်ဆု ပြန်သိမ်းသင့်သလား?...
ရန်ကုန်မြို့ ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင် မီးလောင်မှု မြင်ကွင...
မူးယစ်ဆေးဝါး မြန်မာ ဆက်ထုတ်နေဟု ထိုင်း ဒု ၀န်ကြီးခ...
မလေးရှားကို မြန်မာအမျိုးသမီး အလုပ်သမများ တရားဝင်ပိ...
တူရကီနိုင်ငံတွင် လှေနစ်မြုပ်၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမာ...